हाइड्रो/निमार्ण Archives - Aajavoli
कुद्ने भो रेल, जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको लिक बिच्छ्याउने कार्य तीव्र
Gopi Bhattarai १० माघ २०७४, बुधबार January 24, 2018
वीरेन्द्र कर्ण । छिमेकी मुलुक भारतको जयनगरदेखि धनुषा जिल्लाको जनकपुर–कुर्थासम्म ३२ किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण कार्यअन्तर्गत लिक (पटरी) बिच्छ्याउने काम द्रूत गतिमा अगाडि बढेको छ। जनकपुर–जयनगर–बिजुलपुरा–बर्दिवास ६९ किमीमा एक हजार ६७६ मिलिमिटर चौडाइको ब्रोडगेज रेलमार्ग विस्तार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल तथा भारत सरकारबीच सन् २०१० मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुरुप भारत सरकारले सन् २०१५ सम्ममा जयनगरदेखि जनकपुर–बर्दिवाससम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजना
Gopi Bhattarai २ मंसिर २०७४, शनिबार January 11, 2018
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरबको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङको आइतबार ‘ब्रेक थ्रू’ हुने भएको छ । दोलखा जिल्लामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको यस आयोजनाको सुरुङको लम्बाई आठ दशमलब दुई किलोमिटर रहेको छ । आयोजनाको सिभिभलतर्फको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनका प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठका अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकलका लागि सामानहरु आयोजना स्थलमा पुर्याउने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी खाँडीचौरदेखि सिंगटीसम्मको
Lok Awasthi ३१ श्रावण २०७४, मंगलवार November 1, 2017
बझाङ । बझाङमा रहेको गडीस्थित २०० किलोवाट क्षमताको सुर्मादेवी साना जलविद्युत् आयोजना मर्मत सम्पन्न भएको एक वर्ष नबित्दै नचल्ने अवस्थामा पुगको छ । विदेशी दाताको सहयोगमा झण्डै ८६ करोडको लागतमा महंगो गरी निर्माण भएको भए पनि एक वर्षमै विग्रिएको छ । विद्युत् अनियमित हुँदा यहाँका सरकारी कार्यालयको कामकाज, व्यापार र उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित बनेको थियो । मर्मत योजनामा नै
कुलमानको बिजुली चमत्कारः २०७३ उज्यालो वर्ष
Lok Awasthi ३१ चैत्र २०७३, बिहीबार
काठमाडौं । २०७३ लाई फर्केर हेर्दा यो वर्ष नेपालको इतिहासमा उज्यालो वर्षको रुपमा गणना भएको छ । जसले लोडसेङिलाई अन्त्य गरी बिजुली चमत्कार गरेको छ । यसको जस या श्रेय कुलमान घिसिङले पाएका छन् । जुन नेपाली उर्जाको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ । सरकारको गठनसँगै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ नियुक्त भएपछि एकाएक नेपाली उर्जाको क्षेत्रमा कायापलट भयो । प्राधिकरणको
चमेलिया जलविद्युतको कार्यमा तिब्रताः सुदूरपश्चिम लोडसेडिङमुक्त हुने
Lok Awasthi २२ फाल्गुन २०७३, आईतवार March 13, 2017
दार्चुला। चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ मार्गको काम सम्पन्न भएको छ । दार्चुला जिल्लामा रहेको निर्माणाधीन ३० मेगावाट क्षमताको आयोजना सरकारको प्राथमिकता भित्र परेको कारण कामा तिव्रता आएको हो । अगामी वर्ष यसको परिक्षण परियोजना संचालन हुने छ । चमेलियाको जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भए सुदूरपश्चिम विद्युत्भार कटौतीमुक्त हुने छ । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम सम्पन्न हुने भएपछि
Lok Awasthi २२ माघ २०७३, शनिबार February 7, 2017
काठमाडौं । सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको हो। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी केही दिन पहिले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गराएको हो। कम्पनी दर्ता भएपछि थप आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले सो आयोजना
प्राधिकरणको काममा तिव्रताः ९३ हजारको गुनासाको निराकरण
Lok Awasthi १८ माघ २०७३, मंगलवार February 1, 2017
काठमाडौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दर्ता भएका ९३ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितको गुनासा फछर्यौट गरेको छ । सबै भन्दा बढी प्रभावित १४ जिल्लाका दुई लाख चार हजार १७७ गुनासामध्ये हालसम्म ९३ हजार ३७४ फछर्यौट भइसकेको प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका र गाविस र जिविसले फछ्र्यौट गर्न नसकेका गुनासा केन्द्रमा दर्ता भएका
Lok Awasthi १३ माघ २०७३, बिहीबार January 28, 2017
कम्पनी लिमिटेडले दोश्रो आयोजनाको रुपमा दार्चुला जिल्लामा बहने नौगड गाढ नदीमा ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगड गाढ साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । यो आयोजनाको कुल लागत रु.१४४ करोड हुने अनुमान छ । यस मध्ये रु.१०० करोड (७०%) बैंक ऋण र ४४ करोड (३०%) शेयरधनीको लगानी रहने छ । यसमा श्री नेपाल एस.बि.आई. बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा प्रभु बैंक लिमिटेड
२ सय ४० परिवारलाई दोस्रो किस्ता
Lok Awasthi ९ माघ २०७३, आईतवार January 24, 2017
काठमाडौं। भूकम्प अतिप्रभावित चार जिल्लामा २४० परिवार दोस्रो किस्ता पाउनका लागि जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रमाणित भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो किस्ता लिई निजी आवास निर्माणका लागि जगको काम सम्पन्न गरेका लाभग्राहीलाई गाउँ÷नगरमा खटिएका इन्जिनियरले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना भनी सिफारिस गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया पार गरेर आउने लाभग्राहीको सङ्ख्या २४० रहेको
बन्ला त लमजुङ हाइड्रो मोडेल जिल्ला ?
Lok Awasthi ९ माघ २०७३, आईतवार January 22, 2017
लमजुङ । नेपालका अरु जिल्ला भन्दा जलविद्युत् निर्माणमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको भन्दै लमजुङलाई हाइड्रो मोडेल जिल्ला घोषणा गर्न विशेष पहल गरिने भएको छ । लमजुङ महोत्सवका अवसरमा गरिन लागिएको जलविद्युत्सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीबाट जिल्लालाई हाईड्रो मोडेल जिल्ला घोषणा गर्न विशेष पहल गरिने भएको हो । कार्यशाला गोष्ठीको पूर्वतयारी बैठक बसी जिल्लालाई ‘हाइड्रो मोडेल नमुना जिल्ला’ घोषणाको पहल गर्ने निर्णय गरिएको हो